संसाझै १६ वर्षे सुवालको हत्या गरी फरार २ सिद्धपोखरीको गेस्ट हाउसबाट समातिए — Bhaktapurpost.com
संसाझै १६ वर्षे सुवालको हत्या गरी फरार २ सिद्धपोखरीको गेस्ट हाउसबाट समातिए
भक्तपुरपोस्ट संवाददाता भक्तपुर, ८ माघ २०७६
भक्तपुर, ८ माघ २०७६
संसाझै छुरा घोपी १६ वर्षे किसोरको हत्या गरेको अभियोगमा २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ६ भोलाँछेमा छुरा घोपी फरार रहेको आशंकामा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
बुधवार साँझ भोलाँछेमा चाँगुनारायण ७ चोखाका अन्दाजी १६ वर्षिय किसोर रोहन सुवाललाई धारिलो हतियार (छुरा) प्रहार गरी घाईते बनाईएको थियो । स्थानीयको सूचनाको आधारमा प्रहरीले सुवाललाई उद्दार गरी भक्तपुर अस्पताल तर्फ ल्याउदै गर्दा उनको बाटोमै मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसरका डीएसपी कुमार बिक्रम थापाले बताए ।” घाईते रोहनलाई भक्तपुर अस्पताल ल्याइएपनि चिकित्सकले उपचारको लागी ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको घोषणा गर्नुभयो ।” डीएसपी थापाले भक्तपुर पोस्टसंग भने ।
प्रहरीका अनुसार छुरा प्रहार गर्ने मानिसहरु भने फरार भैसकेका थिए । हुलिया पहिचान गरी खोजतलास गर्ने क्रममा राती ८ बजेको समयमा शंकास्पद २ जनालाई भक्तपुर १ दुधपाटीस्थित सिद्धपोखरीनजिकको कान्तिपुर गेष्‍ट हाउसबाट नियन्त्रणमा लिइएको डीएसपी थापाको भनाइ छ ।
”उमेर १५/१६ वर्ष बताउने २ जना शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई कान्तिपुर गेष्‍ट हाउसको कोठा नं. २०३ मा लुकीछुपी बसेको अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिईएको छ ।” डीएसपी थापाले बताए । हत्यामा प्रयोग गरिएको छुरा समेत प्रहरीले फेला पारेको बताइएको छ । ”पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले देखाए अनुसार खोज्दैजादा घटनाको क्रममा प्रयोग भएको छुरा समेत बरामद गरीएको छ ।” सूचना अधिकारी समेत रहेका डीएसपी थापाले भने ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरुले भक्तपुर २ कालोपाटी देखी झौखेल जाने सडक नजिकको झाडीमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा छुरा भेटिएको बताइएको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको पहिचान सार्वजनिक गरिएको छैन । उनीहरुलाई महानगरीय प्रहरी परिसरमा राखी हत्याको थप अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।